Soo -saarayaasha Jaranjarooyinka - Shirkadaha Shiinaha ee Warshadaha & Warshadda
Birta Anti-Rust Steel Steel Spiral Staircase ee Meel Yar
1. Raad -raaca yar ee jaranjarada muquuninta ayaa sahlaysa in lagu dhejiyo nashqad kasta. Jaranjarooyinka muquuninta waxay badbaadiyaan mitir laba jibbaaran oo qiimo leh maxaa yeelay waxay degan yihiin aag aad uga yar jaranjarada caadiga ah. Iyada oo leh qaabab dhiirranaan leh iyo qaabaynno kala duwan, waxay kaloo noqon karaan shay astaan ​​u ah mashaariicda.
2. Waxaad noo soo diri kartaa cabbirka ama sawirka mashruucaaga. Haddii aadan lahayn cabbir, kooxda naqshadeeyaha ayaa kula xiriiri doonta adiga ama injineerkaaga dhibaatooyinka xallinta.
Muraayadaha Handrail ee Jaranjarada Qaloocan ee Kaydinta Meesha Guriga
Jaranjarada qaloocan ee quruxda badan oo kakan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay meesha ugu sarreysa ee farsamada gacanta. Kooxdayada xirfadda leh waxay leeyihiin waayo -aragnimo hodan ah, karti iyo xirfado, waxayna bixin karaan adeegga tayada ugu sarreeya laga bilaabo waxyiga ilaa rakibidda.
Jaranjarada qalooca leh ee si fiican loo qaabeeyey ayaa bixisa wax ka badan ujeeddadeeda shaqaysa. Dhab ahaantii, jaranjaradu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah naqshadda, meel focal, badanaana waa qaybta ugu horreysa ee alaabta guriga ee martidu aragto.
Beam Labalaab ah oo aan lahayn Birta Stringer Jaranjarada Toosan
Xariga labalaabsani waa naqshad jaranjarada sabaynaysa oo ku tusaysa labada xadhig hoostooda oo ka soo geesaha jaranjarada si aad u eegto sabayn.
Jaranjarooyinka labalaabka ah waxaa loo isticmaali karaa codsiyada degaanka ama ganacsiga, iyo sidoo kale mashaariicda gudaha iyo dibaddaba.
Jaranjarada laba-xadhig leh waxay u dareentaa qaab ahaan inay ka xasilloon tahay jaranjarooyinka xadhkaha ah.
Muuqaalka casriga ah iyo kan casriga ahi waa astaanta jaranjarada laba jibbaaran. Waa jaranjaro isku dhafan oo yeelan kara ku dhawaad ​​tuman kasta (alwaax, muraayad, marmar, bir) iyo alaab gacmeed.
Tallaabada Birta Hore ee Tallaalka Mono Stringer Staircase
1: Stringer: 200*150*6mm A3 budada birta ah ee dahaarka leh, sus304, sus316 satin/muraayada dhameysatay.
2: Tread: 30mm alwaax adag, 25, 52mm galaas dabool leh oo dahaar ah, 30mm marmar adag.
3: Tread support: 6.0mm saxan bir qaro weyn leh, A3 budo bir ah oo la dahaadhay, sus304, sus316 satin/muraayad dhameysatay.
4: Handrail: Φ50.8mm alwaax adag, sus 304 ama sus316 satin/muraayad dhameysatay.
5: Jaranjarada Jaranjarada: 12mm muraayad kulul ama dahaarka leh oo leh sus304/sus316 taagan.
Cantilever aan la arki karin Glass Steel Alwaax Tallaabo sabayn Jaranjarada
1: Xarig aan la arki karin: 150*200*6mm tuubo fidsan.
2: Tallaabo: 50mm tallaabo alwaax adag; 25.52/33mm galaas dabacsan oo dahaar leh/marmar 50mm; Cabbirka tallaabada caadiga ah: 1000*280mm.
3: Qalab adag oo alwaax ah oo ikhtiyaari ah: 1#Xeebta Europen; 2# Geed; 3# Manchurian Ash; 4#Thailand Oak.
4: Xulashada Taleefanka: Muraayadda Muraayada; Taleefanka siligga, tiirarka ul.
5: Dhererka Riser: laga bilaabo heerka 160 ~ 195mm; Hayso kiciyaha agagaarka 185mm.
6: Qaabka jaranjarada: qaab toosan; U qaabeeya iyo qaabka L.
7: Customize: Marka la codsado.